दुबईको सडकमा अलपत्र नेपाली युवाले रुँदै फोन गरे, उनको यस्तो कुरा सुन्दा कस्को मन रुदैन होला (भिडियो सहित) – Classic Khabar
दुबईको सडकमा अलपत्र नेपाली युवाले रुँदै फोन गरे, उनको यस्तो कुरा सुन्दा कस्को मन रुदैन होला (भिडियो सहित)
May 28, 2021 247
भिजिट भिषामा रोजगारीका लागि लगिएका झापामा एक युवाको दुबईमा विजोग भएको छ। झापाकै सूर्य राजवंशीले राम्रो जागिर मिलाइदिन्छु भन्दै १ लाख ६० हजाररुपैयाँ लिएर स्थानीय युवा टेकबहादुर राजवंशीलाई दुबई पठाएका थिए। २ महिना रोजगारी गरेको रकमसमेत कम्पनीबाट नपाएपछि अहिले दुबईमा बेसाहारा बनेका छन ।
बैदेशिक रोजगारीमा गएको ५ महिना वित्दासमेत एजेन्टले काम नमिलाईदिँदा यतिबेला विदेशी भूमीमा अलपत्र परेका छन । उनलाई स्वदेश फर्काउन माग गर्दा समेत सूर्य राजवंशीले आलटाल गरेको पीडित परिवारले आ रोप लगाएको छ। आखिर सत्य कुरा के हो ? कसरी यस्तो अवस्था आयो त यो परिवारमा ? विदेशबाट पिडितले रुँदै फोन गरेर आफुले यस्तोसम्म दुःख पाएको भन्दै अब आ’त्मह’त्या गर्छु भनेपछि श्रीमती रुँदै मिडियामा आएकी थिईन ।
उनले रुँदै यस्तोसम्म सुनाइएकी थिईन कि सुनेर सवै भाबुक वनेका थिए । अहिले ती बिदेशमा अलपत्र वनेका नेपाली युवाले रुँदै फोन गरेका छन । अहिलेको उनको अवस्था रूँदै रूँदै यसरी सुनाए तल भिडियोमा हेर्नुहोला सबैको मन रुनेछ ।
Nextभेरीमा स्वास्थकर्मी माथि यसरी कु टि एको र हेछ (भिडियो हेर्नुहोस्)
कल्पनाले नाटक गरेर कती पाइन ? दुइ बिच गोप्य सहमती भएकै हो ठोकुवा सहित आए बासुरी (भिडियो सहित)
एकै गाउँका छ जनाको मृत्यु, पुरै गाउँ शोकमा डुब्यो
चार वर्षदेखि ड्रग्स सेवन गरिरहेका आर्यनले सोधपुछमा गरे यस्तो सनसनी खुलासा